Horudhac: Leicester City vs Manchester City … (Kooxaha Sky Blue iyo Foxes oo isku qaban doona kulankoodii 100-aad ee horyaalka) – Gool FM
Haaruun February 22, 2020
(Leicester) 22 Feb 2020. Kooxda kaalinta saddexaad ee Leicester City ayaa soo dhoweynaysa naadiga kaalinta labaad ee horyaalka ku jirta ee Manchester City.
Pep Guardiola ee Sky Blue ayaa booqanaya caawa kooxda dawacooyinka lagu naanayso iyadoo ku dagaalamaya booska kaalinta maadaama City ay haatan afar dhibcood kaliya ka sarreyso Leicester City.
Haddii ay caawa adkaato Leicester City waxa ay hal dhibic ka dambeyn doontaa Man City oo ku jirta kaalinta labaad, haddiise ay Sky Blue guul gaarto kulankan waxa ay Foxes ka sare mari doontaa 7-dhibcood.
Man City ayaa 2-0 ku garaacday West Ham United kulankoodii ugu dambeeyey, waxaana ay sagaal dhibcood ka sare mareen kooxda kaalinta afaraad ku jirta ee Chelsea.
Taariikhda: Sabti, 22 Feb 2020
Garoonka: King Power Stadium
Leicester ayaa dhibaato khadka dhexe ee daafaca ay haysataa iyadoo ay ka dhawacan yihiin Nampalys Mendy iyo Wilfred Ndidi, halka sidoo kale uu hal kulan ka ganaaxan yahay Hamza Choudhury, kaasoo casaan qaatay.
Matty James ayaa tartan ugu jira inuu ciyaaro kulankiisii ugu horreeyay muddo 13 bilood ah, halka Ryan Bennett uu diyaar yahay kaddib markii uusan taam u aheyn kulanka Wolves.
Manchester City waxaa ka maqnaan doona David Silva, kaasoo dhaawac jilibka ah lagu saaray kulankii ugu dameeyey oo ay la ciyaareen kooxda West Ham.
Oleksandr Zinchenko ayaa diyaar ah kadib markii uu ganaax ku seegay kulankaas.
Xiddigaha garbaha uga dheela kooxda Man City ee Raheem Sterling iyo Leroy Sane ayaa ku dhow inay soo laabtaan, laakiin kulankan ayaa si aad ah hoosta uga soo galay, mana la filayo inay ka soo muuqdaan inkastoo ay wax waliba dhici karaan.
>- Kani waxa uu noqon doontaa kulankii 100-aad ee labadaan kooxood horyaalka ku dhexmara.
>- Leicester City ayaa khasaaro la kulantay shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku wajahday Manchester City, waxaana kaliya ay ka haysataa hal guul, guushaas ayaana ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markii ay ka hoos ciyaarayeen macallin Claude Puel.
>- Man City ayaa guuldarro la kulantay labo ka mid ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen (Away) horyaalka Premier League isla markaana ay la ciyaareen Leicester City, waxaana ay ka haystaan hal guul, iyadoo markaas ka hor shantii kulan ee ay marti u noqdeen Premier League aysan wax guuldarro ah soo gaarin oo ay ka soo qaateen Foxes 3 Guul iyo 2 Barbaro.
>- Leicester City ayaa barbaro gashay labo kulan oo isku xiga horyaalka Premier League, iyagoo barbaro galay kaliya mid ka mid ah 22-kii kulan ee ugu dambeeyay tartankan (15 Guul iyo 6 Guuldarro).
>- 14-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo uu Brendan Rodgers hoggaamiyey Leicester, kooxda Foxes ayaa laga dhaliyey kaliya 7 gool.
>- Manchester City ayaa guuldarro la kulantay afar ka mid ah 13-keedii kulan ee ay marti ahaayeen (Away) horyaalka Premier League xilli ciyaareedka, (8 Guul iyo 1 Barbaro), waana in ka badan intii ay sameeyeen wadar ahaan labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay oo ay keensadeen 30 guul, 4 barbaro iyo 4 Guuldarro, Man City ayaan ku guuldarreysan inay gool dhaliso kulamo isku xiga oo ay marti tahay (away) horyaalka tan iyo bishii Janaayo sanadkii 2017-kii.